Apple inopera kupererwa neApple Watch Series 6 titanium | IPhone nhau
Apple inopera kupererwa neApple Watch Series 6 titanium
Ikozvino Apple Watch Series 6 ine titanium casing iri shoma. Zvinotaridza kuti zvese muUS uye mune mamwe misika mikuru, zvinonetsa kuwana mhando inowanikwa yeiyo Shanduro yeApple Watchndiko kuti, akateedzana 6 mune titanium apedza.
Kufunga nezve kuti kune mwedzi uye zvishoma zvishoma kune iyo Gunyana Apple Keynote, Zvinogoneka kuti iyo nyowani 7 nhepfenyuro ichavhurwa gore rino, uye ndicho chikonzero chechitoro chapera.
Mark Gurman yakaburitsa pane yake blog Bloomberg kuti parizvino hapana kuwanikwa kweApple Watch Edition (iyo ine titanium casing) muUS uye mumisika mikuru yekambani.
Apple haina kuzivisa chero chinhu mune izvi, kana kuti iyo modhi yambomiswa kana kuti kune matambudziko ekupa. Zvingangodaro chikonzero ndiko kuvhurwa kuri pedyo kweiyo Nhepfenyuro dzeApple 7, yakarongerwa mwedzi waGunyana mune yakakosha iyo kambani ichapemberera kuunza iyo nyowani iPhones gore rino.
Dzidziso inotsanangurwa naMark Gurman pane rake blog ndeyekuti iri modhi inodhura kwazvo, uye izvo nekuda kwekutengeswa kushoma, kambani haina kuda kugadzira akawanda mayunitsi, uye yapera sosi.
Asi ini ndinoenda kumberi. Nei Apple isina kugadzira mamwe mayunitsi payakaona kuti yaizopera stock? Nekuti zvinokwanisika kuti sezvakaitika gore rapfuura neApple Watch Series 5, iyo nyowani nhevedzano 7 inopa mashoma kwazvo nhau kana ichienzaniswa neazvino Series 6, iyo kambani inosarudza rangarira iyo Apple Watch Series 6 painotangisa iyo Series 7, uye ndosaka isina kusarudza kuzogadzira zvakare nhevedzano iyo yainoronga kurega pamwedzi.
Saka tichamirira chiitiko chinotevera cheApple, musimboti waGunyana (pasina kusimbiswa zvakadaro), uye isu tichasiya kusahadzika kana fungidziro dzangu dziri dzechokwadi kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inopera kupererwa neApple Watch Series 6 titanium
Iko kushanduka kwekudzora kwevabereki pane iOS uye iPadOS nekuburitswa kweNguva yekushandisa API
Instagram yevana vari pasi pegumi nematatu ichave yechokwadi munguva pfupi